कपडा धागोको उत्पादन प्रक्रिया - Zhejiang Leinuo वस्त्र टेक्नोलोजी कं।, लिमिटेड.
लिक्राCity name (optional, probably y y y
कपडा धागोको उत्पादन प्रक्रिया
कताई प्रक्रियामा आठ चरणहरू सामेल छन्, अशुद्धता हटाउने सहित, loosening, खुकुलो पार्दैछ, कार्डि, संयोजन गर्दैछ, ड्राफ्टि, घुमाएर र घुमाउरो.
स्पिनिंग यार्नमा छोटो फाइबर कताईको अध्ययन हो. यार्नहरू साधारणतया फरक-फरक लम्बाइका छोटो रेसाहरूको टुक्राले बनाइन्छ, अथवा धेरै लामो समयसम्म निरन्तर मोनोफिलामेन्टहरू घुमाउँदा। कताकता प्रक्रियामा, पहिला असिद्धता हटाउन ै पर्छ, छ, कच्चा पदार्थको प्रारम्भिक प्रशोधन गर्ने, कच्चा पदार्थ कताई गर्ने तयारी पनि भनिन्छ । विभिन्न प्रकारका कच्चा पदार्थ, अशुद्धताको विभिन्न प्रकार र गुण, प्रशोधन विधि र प्रविधिहरू पनि फरक हुन्छन्। कच्चा मालको प्राथमिक प्रशोधन विधिहरूमा मुख्यतया भौतिक विधिहरू समावेश हुन्छन् (जस्तै कपास जिनिंग), रासायनिक विधिहरू (जस्तै: hemp degumming, रेशम घाउ) र शारीरिक र रासायनिक विधिहरूको संयोजन (जस्तै: ऊन धुने र कार्बोनेसन).
अव्यवस्थित र नजिकबाट जडान गरिएका फाइबरहरूलाई देशान्तर अनुक्रममा प्रशोधन गर्न र निश्चित आवश्यकताहरूसँग महीन धागो, लम्की फाइबरलाई एकल फाइबरमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ, फाइबर कच्चा मालहरूमा अवस्थित तेर्सो जडान हटाउनुहोस्, र शुरू देखि अन्तसम्म दृढ longitudinal सम्बन्ध स्थापित. पहिलोलाई रेसाहरूको विकाश भनिन्छ र पछिल्लोलाई रेसाहरूको संकलन भनिन्छ। फाइबर रिलीज फाइबर बीचको ट्रान्सभर्स जडान पूर्ण रूपमा हटाउन हो। तर फाइबरमा भएको क्षतिलाई कम गर्नुपर्छ। रेसाहरूको संयोजनले गर्दा ती रेसाहरूले देशान्तरको जडानलाई क्रमैसित मिलाउन सक्छन्. यो जडान निरन्तर छ, र असेंबली निकायमा फाइबरको वितरण समान हुनुपर्दछ, र एकै समयमा एक निश्चित रैखिक घनत्व र शक्ति छ। फाइबर असेंब्ली, एउटा निश्चित मोड पनि थप्नुपर्छ। सम्मेलन प्रक्रिया एक पटकमा सम्पन्न भएको छैन, कार्डि through मार्फत, ड्राफ्टि and र धेरै पटक घुमाउने काम पूरा गर्न.
खुकुलो पार्नु भनेको ठूलठूला रेसाहरूलाई स-साना टुक्रा वा बन्डलमा च्यातचुत पार्नु हो। व्यापक रूपमा बोलिरहेकै हुन्छ, हेम्प डिगुम्मिङ पनि एक प्रकारको खुला खुकुलो हुन्छ। खुल्ने र खुकुलो बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्दा, फाइबर र अशुद्धताबीचको बन्धन कमजोर हुन्छ, त्यसैले अशुद्धता हटाइन्छ, अनि रेसाहरूबीच मिसावट सम्भव हुन्छ। खोलिने र खुकुलो पार्ने कार्य र अशुद्धि हटाउने काम एकैपटक सम्पन्न हुँदैन, तर च्यात्नुको व्यावहारिक कन्फिगरेसन मार्फत, स्ट्राइकिङ र खण्डिकरण र अन्य प्रकार्यहरू बिस्तारै थाहा पाउन.
कार्डिङ प्रभाव के हो भने, कार्डिङ मेसिनमा धेरै घना कार्डिङ सुईहरूले साना टुक्राहरू र रेसाहरूको बन्डललाई एकै अवस्थामा खुकुलो बनाउँछन्, यसप्रकार फाइबर लोजि improving सुधार गर्दछ। पछि कार्डि card, रेसाबीचको ट्रान्सभर्स जडान मुलत: हटाइएको छ, र अशुद्धता हटाउने र मिक्सिंगको प्रभाव बढी पर्याप्त छ। तर फाइबरको एक धेरै वक्र छन्। त्यहाँ एक वक्र हुक छ।, र त्यहाँ प्रत्येक फाइबर बीच एक निश्चित अनुप्रस्थ कनेक्शन छ.
कंम्बि machine मेशिनको क comb्बिंग फंक्शन भनेको होल्डिंग स्टेट अन्तर्गत फाइबरको दुई सिराका लागि विस्तृत क comb्गिंग गर्न क carry्ग्सको प्रयोग गर्नु हो। मेशिन प्रशोधनले निश्चित लम्बाई मुनि छोटो फाइबर र राम्रो दोष हटाउन सक्छ, र फाइबरलाई अधिक समानान्तर र सीधा बनाउनुहोस् ।केमिकल फाइबर यसको सफा लम्बाइको कारण, कम अशुद्धता, सिधा समानान्तर अवस्था राम्रो छ, साधारणतया कम्बरको प्रक्रियाबाट होइन.
कार्डि after पछि पट्टी लामो र पातलो कोरिएको छ, बिस्तारै पूर्वनिर्धारित मोटाई पुग्छ, यस प्रक्रियालाई ड्राफ्टि called भनिन्छ। यसले फाइबरहरू बीच नियमित जडान स्थापनाको लागि आधारशिला राखेको छ। तथापि, रेखाचित्रले धागोको असमान छोटो खण्ड ल्याउनेछ, त्यसैले यो उचित ड्राफ्टि device उपकरण र प्रक्रिया प्यारामिटर कन्फिगर गर्न आवश्यक छ.
घुमाउरो भनेको आफ्नो अक्ष वरिपरि ह्विस्कर घुमाउनु हो, ताकि रेसाहरू ह्विस्करको अक्षीय दिशासँग समानान्तर हुन्छन्, यसरी फाइबरहरू बीचको देशान्तर जडान निश्चित गर्न रेडियल चाप उत्पन्न गर्दै.
अर्ध-समाप्त वा समाप्त भएका उत्पादनहरूको घुमाउने फर्ममा जुन भण्डारणको लागि उपयुक्त छ, अर्को प्रक्रियामा यातायात र प्रशोधनलाई विन्डिङ भनिन्छ। उत्पादनको उत्पादन र गुणस्तरमा असर नपर्ने गरी निरन्तर रूपमा हावा चल्ने प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्छ, र सम्भव भएसम्म घुमाउरो प्रक्रियाबाट हुने क्वालिटी समस्याहरूलाई कम गर्न विभिन्न प्रक्रियाहरू बीच निरन्तर उत्पादन प्राप्त गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ.
सारांशमा, कताकता प्रक्रियामा साधारणतया कच्चा पदार्थको तयारी हुन्छ, रिवाइन्ड गर्दैछ, कार्डि, अशुद्धता हटाउने, blending, ड्र�मिश्रणटि, blending, घुमाउदै, र हावा, तीमध्ये केही दोहोर्याइएको प्रक्रियाद्वारा सम्पन्न हुन्छन्.
स्याल फर को सफाई विधि
शिनजियांगमा कपासको परिचय